China 3D Lapel pin ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | Kingtai
High mgbatị mgbatị utịp ke ọcha dị larịị elu na a edo ziri ezi ikpeazụ result.The ebu eji kee 3D oge ọgbụgba-ewe ogologo oge karịa ọkọlọtọ 2D Ebu n'ihi na ha mmepụta usoro bụ ihe mgbagwoju na ha na-mere kpamkpam site ejiri mee. na obi tara mmiri, plating nwere ike ịhazi.
A na-emepụta ihe nkedo site na usoro nkedo, ebe a na-agbanye ụdị mmiri mmiri nke ihe mgbakwasị ụkwụ na-abanye n'ime ihe eji emepụta ahazi, ma ọ bụ "nkedo" .Casting na-emepụta pinel 3D lapel site na ọtụtụ ọla, gụnyere pewter na zinc.
Kedu uru ndị dị na mgbatị?
Nkedo bụ kpọmkwem usoro ruru eru ka a akpan akpan imewe, karịsịa mgbe ọ na-abịa omenala lapel atụdo.
Mgbe etinyere ụghalaahia kama ka a zọọ ya, a na-emepụta ngwaahịa dị nro, nke gbagwojuru anya.
Nkedo bụ ihe magburu onwe oke ruru nkọwa nyere site na iji omenala Ebu na-chepụta ezi edoghi, okirikiri ma ọ bụ ndị ọzọ pụrụ iche na-akpụzi, na ezi uche depictions ,.
Ọ bụghị naanị na nhọrọ magburu onwe ya metụtara nkọwa nkọwa, mana nkedo nkedo nwere obere njupụta karịa akara ha, ọkụ, na-eme ka ha nwee nhọrọ dị oke ọnụ ma dịkwa ọnụ ala Ọ naghị etinye gị ọtụtụ ibu ego.
Emere pewter ma ọ bụ zinc
Mgbe ịchọrọ ịhazi nkedo lapel gị ka ọ bụrụ ihe nkedo, chee echiche banyere otu ị ga-esi mee ka imewe gị bụrụ ihe nkedo akwa. Ọ bụrụ na nkọwa na ahịrị gị adịghị mkpa ụcha agbacha iji mezue, mana usoro ikpeazụ bụ ihe ịtụnanya, echere m na nkedo bụ nhọrọ ziri ezi maka imewe gị,
Mgbe ị chọrọ ịtụ ntụtụ, ịnwere ike iji zinc na-enye ohere ma ọ bụ na-enweghị pewter.Zinc bụ igwe dị mfe nke nwere ike ịkpụzi n'ụzọ ọ bụla n'ụdị ma ọ bụ oke ọ bụla ị chọrọ.Pewter bụ alloy dị arọ, ọ bụkwa nhọrọ dị mkpa mgbe ị chọrọ hazie gị imewe.
Ọ bụrụ na, ndị Die-egbu dị maka nkọwa nkọwa, mana ntụgharị na-eme, nke na-enye anyị ohere ị nweta ụdị ahaziri iche anyị chọrọ. ya kacha mma nhọrọ maka 3d imewe ruo mgbe ebighị ebi
Nke gara aga: Rhinestone lapel pin
Osote: Dangling Lapel mkpọ
3D Lapel atụdo
Agba lapel pin